(Dhagayso) Waxgaradka Saaxo oo nasiib-darro wayn ku tilmaamay in Galmudug ay sheegato degmada Saaxo. – Radio Daljir
(Dhagayso) Waxgaradka Saaxo oo nasiib-darro wayn ku tilmaamay in Galmudug ay sheegato degmada Saaxo.
Agoosto 18, 2015 11:56 b 0
Saaxo, August, 18, 2015 – Xilli maantay madaxwayne kuxiggeenka Galmudug uu warbaahinta u sheegay in degmada Saaxo ee Puntlnad ay ka tirsan-tahay maamulka Galmudug ayaa arrintaasi waxaa nasiib darro wayn ku tilmaamay waxgaradka iyo odoyaasha degmada Saaxo ee Puntland.
Shir looga soo horjeedo hadalka kasoo yeeray M/kuixggeenka Galmudug Xaashi oo ay kasoo qaybgaleen aqoonyahannada, waxgaradka, iyo nabadoonnada Saaxo ayaa galabtay lagu qabtay degmada Saaxo waxaana shirkaasi kasoo baxay War-Murtiyeed faahfaahsan.
Maxamed Daahir Muuse oo ka tirsan waxgaradka degmada Saaxo ayaa waraysi uu siiyay Radio Daljir waxaa uu ku caddeeyay dareenka odoyaasha Saaxo. Waxaana sidoo kale isna waraysi arrintaasi la xiriira bixiyay Nabadoon Maxamed Cabdullaahi Jaamac oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka aad-ka looga yaqaan,
\_”Waa nasiib-darro aad u wayn iyo hurun colaadeed, Saaxo waxay ka mid tahay gobolka Mudug, dhismaha Galmudugna Saaxo way ka horraysay, waxaan caalamka u sheegaynaa in Galmudug ay hurrinayso colaad sokeeyo, isir iyo dad-ba Saaxo waa Mudug Puntlad\_” Sidaasi waxaa yiri Maxamed Daahir Muuse oo ka mid ah waxgaradka degmada Saaxo ee Mudug Puntland.
Sidoo kale waxaa isna waraysiga ka hadlay Nabadoon Maxamed C/llaahi Jaamac oo yiri \_”Aad iyo aad ayay noo dhibtay hadalkaasi kasoo yeeray Galmudug, horrayna calaado ayaa deegaanka horray uga jiray, Saaxo Galmudug way ka horraysay, cid la khasbi -karana ma jirto, balse dadka waxaan u sheegaynaa in ay Galmudug hurinayso colaado ka qarxa deegaankaan iyo dagaalo sokeeyo\_” Sidaasi waxaa yiri Nabadoon Maxamed C/llaahi Jaamac oo ka mid ah waxgaradka degmada Saaxo ee gobolka Mudug.
(Dhagayso) Maamulka Degmada Saaxo oo ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray Galmudug
(Dhagayso) Duqa Laascaanood oo cabasho wayn ka muujiyay adeegyada aasaasiga u ah nolasha bulshada gobolka Sool